टेरेसा बिश्वकर्मा र आमा गीत हिट भएपछि खुशीले उफ्रिए । शिशिरलाई यस्तो कोसेली दिए, कोच मिलनले के भनिन ? (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
टेरेसा बिश्वकर्मा र आमा गीत हिट भएपछि खुशीले उफ्रिए । शिशिरलाई यस्तो कोसेली दिए, कोच मिलनले के भनिन ? (भिडियो हेर्नुस)
द भ्वाइृस किड्सकी टेरेसा बिश्वकर्मा र उनको आमाको आवाजमा रहेको गीत चरी भररले दर्शकहरुको राम्रो साथ र माया पाएपछि टेरेसा बिश्वकर्मा शिशिर भण्डारीलाई भेट्न का्सेली लिएर पुगिन् । टेरेसा र उनको आमा यो गीतले पाएको मायाले निकै खुशी छन् । दैलेखबाट शहरमा आएको यो परिवारमा आमा र छोरीको सपना पुरा भएको छ भने बुवाको कानको अप्रेशनका लागि पनि उपचार खर्च जुट्दै छ । शिशिर भण्डारीले पहल गरी आफ्नो शव्द सँगीतमा आमाछोरीको गीत चरी भररको भिडियो सहित ल्याएका थिए । टेरेसाको बुवा ८ महिना यता कान सुनदैनन् । मुटु हुँदै खुट्टामा समस्या आएपछि उनको बुवा राम बहादुर बिश्वकर्माले आफ्नो छोरीको प्रस्तुति द भ्वाईस किड्मा सुन्न पाएनन् । उनको उपचारका लागि लाखौं खर्च लाग्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
गीतले युटुबमा ट्रेण्डिँगको यात्रा पनि तय गर्यो । हजारौं दर्शकहरुले र श्रोताहरुले यो गीतका शव्दहरुको तारिफ गरेका छन् । मौलिक लोक भाकामा बनेको गीतलाई हालसम्म ३ लाख माथिले हेरेका छन् । टेरेसाले शिशिरलाई कोसेली दिदै आफुहरुलाई यति धेरै खुशी दिएकोमा धन्यवाद दिईन् । गीत आईसकेपछि यो परिवार निकै खुशी भएको छ । गीतले छोटो समयमै युट्युबमा धेरैको माया र साथ पाएको छ । २४ घण्टामै लाखौं भ्युज र हजरौं राम्रा कमेन्टहरु पाएको गीतमा टेरेसा र उनकै आमाको अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई सन्तोष राजवहाकले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियो हेर्नुस